Sunday March 17, 2019 - 06:37:57 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay dagaal beeleed maalintii labaad maleeshiyaad hubeysan ku dhaxmarayo deegaanno dhanka Bari uga beegan magaalada caasimadda ee Muqdisho.
Maleeshiyaad ku sugan sh/dhexe
Wararka ka imaanaya deegaanka Burdheere oo hoos taga degmada Cadale ayaa sheegaya in halkaas ay ku dagaallamayaan maleeshiyo beeleedyo hubeysan, ugu yaraan 14 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dagaalka oo ah mid aad u xooggan.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaallada ay ka qeyb qaadanayaan gaadiidka Tiknikada loo yaqaan oo ciidamo katirsan DF-ka ay qaab beeleed ugu kala taageereen dhinacyada dagaallamaya.
Hugunka rasaas xooggan oo labada dhinac is dhaafsanayaan ayaa laga maqlayaa deegaanno badan oo hoos yimaad degmada Cadale, dadka deegaanka ayaa sheegay in colaaddan ay gadaal kasoo riixayaan saraakiil katirsan Dowladda Federaalka oo ku sugan Muqdisho iyo Cadale.
Dhowr jeer ayay soo laalaabteen dirirta udhaxaysa maleeshiyo beeleedyada deegaannada gobolka Sh/dhexe ee ay xoogga ku joogaan ciidamada shisheeyaha AMISOM waxaana cadowga shisheeye lagu eedeeyaa in uu qeyb ka yahay hurinta colaadda waxaa xusid mudan in dhulka lagu maamulo shareecada islaamka ay beeluhu si nabad ah ku deganyihiin haddii ay isqabtaana durbadiiba lakala dhaxgalo.